Galicia waxay rabtaa inay hogaamiso wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karo ee Spain | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomas Bigordà | | Biyomareenka, Awoodda dabaysha, Tamar-dhuleedka, tamarta Haydarooliga, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Mr. Alberto Núñez Feijóo, madaxweynaha Xunta qanciyay in Galicia, "ay u badan tahay inay la socoto Castilla y León", waxay mar kale hoggaamin doontaa wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karo sannadaha soo socda.
Waqtigan xaadirka ah, marka loo eego waaxda dabaysha, khariidadda wadada 'Xunta de Galicia' ayaa ku fekereysa taas 2020 waxay ku shaqeynayaan meel u dhow 4GW ee awoodda.
Hadafku waa in la gaaro 6.000 megawatts tobanka sano ee soo socota, iyada oo ay ugu wacan tahay tas-hiilaadka lagu siiyay sharciga cusub ee hirgelinta ganacsiga. Sida laga soo xigtay Xunta, waxay ka dhigan tahay a Kahor iyo Kadib dhammaan kuwa doonaya inay maalgashadaan Galicia, dhinaca dib-u-cusboonaysiinta laakiin sidoo kale qaybaha kale ee kobcaya ee dhaqaalaheenna.
Waxyaabaha cusub ee sharcigan ka fikiraya, madaxweynaha gobolku wuxuu carrabka ku adkeeyay inay dejineyso tiro lagu kala soocayo mashaariicda warshadaha ee loo arko inay yihiin dan gaar ah bulshada. Sidan oo kale, isku day ayaa la sameeyay si kor loogu qaado dhaqdhaqaaqa maamulka ee hawsha.
Xaqiiqdii, wadar ahaan 18 beerood ayaa horay loogu dhawaaqay mashaariic dano gaar ah leh, kuwaas oo 12 kamid ah horey loo fasaxay. Ugu dambeyntiina, waxa aan dooneyno in shirkadaha ay ku sharxaan Galicia, ayuu raaciyay madaxweynaha gobolka, marka lagu daro muujinta taas Tamarta la cusboonaysiin karo Waxay bixiyaan ku dhowaad 90% korantada ay isticmaalaan Galicians, halka ay matalayaan 4,3% ee GDP-ga dhulka.
Riwaayad kale oo uu soo saaray Sharciga Ganacsigu waxay ahayd abuuriddii Oktoobar ee la soo dhaafay diiwaanka dabaysha Galician, halkaas oo codsi ah in la dilo 1,126 megawatts horey loo duubay.
0.1 Beerta dabaysha Malpica
1 Kordhi tamarta kale ee dib loo cusboonaysiin karo
1.1 Istaraatijiyad Kordhinta Biomass
3 Ka faa'iideyso Geothermal
Beerta dabaysha Malpica
Mudane Feijoo, wuxuu ka faa'iideystay booqashadiisa si uu u dhigo beerta dabaysha ee Malpica oo tusaale u ah mashruuc ku lug leh "ballan qaad saddex-geesood ah": deegaan, degmo - maadaama ay u oggolaanayso shaqo-abuurista golayaasha gobolka - ugu dambeyntiina ballanqaadka Dowladda dib loo cusboonaysiin karo, oo ah baarkinkii labaad ee dib loogu celiyo deegaanka.
Kordhi tamarta kale ee dib loo cusboonaysiin karo
Kaliya maaha awoodda dabaysha inay muhiim tahay, Xunta waxay kaloo isku dayeysaa inay dhiirrigeliso tamarta kale ee la cusboonaysiin karo. Xaqiiqdii, Galicia waxaa ka jira nidaam si heer sare ah u da'a roobka, sidaa darteedna, tamarta qorraxda waxtar badan ma leh, wuxuu soo bandhigay istiraatiijiyad lagu hagaajinayo tamarta biomass. Natiijada dheelitirka ayaa ah taas Dhamaadka sanadka 2017, rakibaadda in ka badan 4.000 biyo kululeeyaha guryaha ayaa la taageeri doonaa.
Iberdrola waxay dhameystirtay sanadkii la soo dhaafay ballaarinta dhismaha ugu weyn ee tamarta korantada ee Galicia, kadib markii la howlgeliyay warshadda cusub ee San Pedro II, caleema saaray by madaxweynaha shirkadda korontada, Ignacio Galán, iyo madaxweynaha Xunta de Galicia, oo ku yaal Sil Basin, Nogueira de Ramuín (Ourense).
Hawlgalinta xaruntani waxay ku lug leedahay ballaarinta dhismaha Santo Estevo-San Pedro hydroelectric, oo la qabtay tan iyo 2008 oo ku dhow 200 malaayiin ku dhowaad 800 oo qofna waxaa lasiiyay shaqo.
Ka faa'iideyso Geothermal
Ciida Galiyaanka waa hodan, waxay soo saartaa ubaxyo iyo muuqaallo u gaar ah, laakiin dhulka hoostiisa sidoo kale wuxuu gaar u yahay keydinta hantida, inta badan jeer khasaaray. Marka lagu daro karaameynta kuleylka, waa inaan ku darnaa hantida dhulka hoostiisa ku jirta.
Sida laga soo xigtay dhowr daraasadood, Galicia ayaa horseedi karta kacaan cusub isticmaalka tamarta dhulka hoostiisa ah, ma aha oo kaliya isha kuleylka laakiin sidoo kale waa isha dhalinta korantada.
Maanta, Galician geothermal horeyba waa hogaamiye qaran. Sida laga soo xigtay xogta Acluxega (Ururka Xeotermia Cluster of Galicia), bulshada ku nool 2017, tirada 1100 nidaam ee qaboojiyaha dhulka oo leh bamka kuleylka. Jaantuskan, waa mid yar haddii aan isbarbar dhig ku sameyno wadamada waaweyn ee qaarada Yurub, laakiin waa hogaamiye heer Spain ah.
Ku saabsan awooda wadarta kuleylka lagu rakibay, waxaa lagu qiyaasay in dhamaadka sanadka 2016 ee Galicia tirada ugu yaraan 26 megawatts la gaarey.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Galicia waxay rabtaa inay hogaamiso wax soo saarka tamarta la cusboonaysiin karo ee Spain